Gaadiidleyda Kenya oo shidaal raqiis ah kasoo iibsanaya Soomaaliya - Halbeeg News
NAIROBI (HALBEEG)- Gaadiidleyda dalka Kenya ayaa tan iyo bartamihii bishii hore ee August ka cabanayay sare u kaca sicirka shidaalka ee ay soo saareen Guddiga Tamarta Kenya.
Ganacsatada ka shaqeeya magaalooyinka Gaaris, Mandheera iyo wajeer ayaa go’aansaday in ay shidaalkooda kasoo iibsadaan Soomaaliya iyada oo sanabta ku qasabtay na ay ku sheegeen in uu sicirkoodu aad uga jaban yahay midka lagu iibaya gudaha dalka Kenya.
Sida lagu faafiyay warbixin ay soo saartay shirkadda Star re fadhigeedu yahay Nairobi dadka ku dhaqan Mandhera wax ay shidaalka kasoo iibsadaan magaalada Beledxaawo oo kaliya 300 oo mitir u jirta Kenya.
Halkii Liitar oo shidaal ah wax aa la sheegay in uu Beled-xaawo ka joogo 100 Shilin oo lacagta Kenya ah oo u dhigan ta hal doolar dhanka ka Kenya wax uu Liitarka shidaalka ka joogaa 140 shilin ana 150 oo lacagfa Kenya ah.
“Lacagta shifaalka lagu iibiyo gudaha Kenya ma aha mid aan awoodo waana lacag aad u badan ma aha lacay anigu bixin karo” ayuu yiri Cabdi Maxamed oo kamid ah tagsiilayaasha ku nool Kenya.
Sida uu sheegay Maxamed Cabid oo kamid ah dadka deegaanka lehna mehrad lagu iibiyo shidaalka’ macaamiisha mehraddiisu ayaa hoos u dhaceysay labadii isbuuc ee lasoo dhaafay sababtuna wax uu ku tilmaamay sare u kaca ku yimid sicirka shidaalka Kenya.
Maxkamadda ciidamada oo xukuntay dhalinyaro lagu eedeyay Al-shabaab